Usoro nke ahia Viking ego - iji mee ngwa ngwa
Isi > Atụmatụ > Strategy nke ahia na Viking crypto ego
04.10.2017 · 0 · Ntinye niile maka October 2017
Ego ego a na-enweta na-aghọwanye ihe na-agbakwasị ụkwụ na ndụ anyị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-amụ banyere ngwá ahịa ọhụrụ a na ego. Banyere progenitor niile crypto-ego - bitcoin nwere ike ịchọta na anyị isiokwu Bitcoin bụ ihe ọ dị na okwu dị mfe. Na atụmatụ ahia taa nke Ego Viking Crypto ga-enyere ndị na-agụ akwụkwọ anyị aka inweta ego Crypto n'enweghị ọbụna inweta ya!
Ọfọn, ọ bụ oge na-aga ahịa ...
Otu esi eme ego na ego mkpuchi.
Strategy nke ahia na Crypto ego Viking ụkpụrụ ọrụ.
Ịtọpụta template atụmatụ.
Usoro nke ahia na akara Crypto ego Viking maka ahia.
Ọnọdụ maka ahia maka mmụba nke Bitcoin.
Ọnọdụ maka ahia na ọnụ na Bitcoin ọnụego.
Otu esi eme ego na Crypto ego
Iji nweta ụgwọ na mkpuchi nke cryptocurrency, ọ dịghị mkpa ịbịakọta ego dijitalụ. O zuru ezu iji mechie nhọrọ ọnụọgụ abụọ na-emeso amụma nke ibu ma ọ bụ imebi ọnụ nke cryptocurrency. Na uru a nwere ike nweta n'ime minit ole na ole nke uru Viking trading trading cryptocurrency na-enye gị ohere ịme uru na 85% nke azụmahịa. Nke a pụtara na enwere ike iji ya rụọ ọrụ dị irè iji mee ka ego dị na ahịa cryptocurrency.
Atụmatụ nke ịzụ ahịa na ego mgbagwoju anya The Viking ụkpụrụ nke ọrụ
Azụmahịa nke ịzụ ahịa "Viking" na-emepụta na-eburu n'uche ihe akọwapụtara nke ahịa crypto-currency. Ya mere, enwere ike iji ya n'oge ọ bụla n'ụbọchị, mgbe ahịa dị na eme. Tụkwasị na nke a, enwere ike iji usoro nyocha nke oge na-eme ka ịkọ ọdịiche na ọnụego mgbanwe nke ego ego dijitalụ.
N'okwu a, maka nyochaa ahịa ahụ, anyị ga-eji usoro atụmatụ gosipụtara na ọganihu na-agagharị ma nyochaa MACD na RSI oscillators.
A na-eji nhazi ntụgharị egosi ihe na usoro abụọ na oge nke removals. Nke a na-enye gị ohere ịchọta oge mgbe ahịa malitere ọmịaka ọhụrụ.
Onye na-eduzi oscillator RSI ga-ekwenye na ọnụahịa nke ego mkpuchi ahụ eruola oke, ọ ga-emezikwa.
Ihe ngosi MACD ga-egosi mmalite nke ọhụụ ọhụrụ na o nwere ike ịmepụta ihe na nduzi nke ahịa ọhụrụ.
Ọnọdụ bụ isi maka ịzụ ahịa na atụmatụ a ga-abụ:
inweta ahịa akụ kriptovalyut n'elu ikpo okwu nke onye na-ere ahịa,
nakwa, n'ụzọ dị oké mkpa, na e nwere njirimara teknụzụ nke dị n'ime ikpo okwu;
Nanị na nke a, atụmatụ a ga-arụ ọrụ na arụmọrụ a na-atụ anya ya. A ga-egosipụta usoro maka igosipụta akara ahịa nke ndị na-egosi na nke a n'isiokwu a Bimo. Na saịtị nke onye na-ere ahia a, e nwere ngwaọrụ niile dị mkpa maka ịzụ ahịa ahịa.
Izizi Template Strategy
Yabụ, ọ dị mkpa ka ịhọrọ ezigbo ihe onwunwe dijitalụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị họọrọ ikpo okwu Binomo otu ụzọ BTC / USD, ya bụ, Bitcoin megide dollar. Mgbe ahụ ịkwesịrị ịgbanwere chaatị nke ederede na oge M1 ma gbakwunye ya na-egosi ya:
Ntughari nke na-aga n'ihu 15 (ndị na-acha ọcha);
5 Mfe Mfe Na-aga Mfe (ndị na-acha ọbara ọbara);
RSI 10, 70 / 30 kachasị elu
MACD - ntọala ndabara
N'ihi ya, ị ghaghị ịmepụta template na eserese iji nweta akara ahịa na mkpokọta usoro ndị a:
Nzuzo ahia ahia Viking maka ahia
Ọrụ nke onye ahịa ahụ bụ ịbanye n'ahịa n'ahịa dị mma kacha mma. Iji mee nke a, ịchọrọ:
Chere ruo mgbe ogbugwoju na-agafe na-agafe ibe gị, na-akọrọ ọdịda nke ọhụụ ọhụrụ.
Mgbe ahụ ịkwesịrị ịnweta nkwenye site n'aka oscillators abụọ dị ka ngbanwe nke RSI na-agagharị na ọkwa nke overbought / oversold na intersection nke MACD edo.
Ọnọdụ maka ahia na ekele Bitcoin
Mbịgharị na-agagharị na-arịgo elu.
NDỊ MACD ga-etolite nkwụsị elu elu.
Ntugharị RSI na-agbanye na ọkwa nke oke.
Ọnọdụ maka ahia na ọnụ na Bitcoin ọnụego
Mbịgharị na-agagharị na mgbada dị ala.
NDỊ MACD ga-etinyere njikọ n'etiti ala.
Ntugharị RSI ga-agbanwe na ọkwa dị elu.
Maka oge M1, nke anyị na-eji ihe atụ na usoro anyị, njedebe kacha mma nke nkwekọrịta ga-abụ 10 nkeji. Maka oge M5, nke akara ngosi ahụ ga-adịkwu mma, oge nkwụsị kwesịrị ịbụ 25 nkeji. Site na nhọrọ ndị dị otú ahụ, usoro Viking ga-enye 85% nke ahịa ahịa bara uru.
A ga-enye usoro nchịkwa nke oge nlekọta na-echekwa nchebe na ọnọdụ nke obere ihe ize ndụ, ya bụ - idozi ego nke azụmahịa ahụ kwubiri na ọkwa nke 5% nke olu nke nkwụnye ego ahụ. Site na obere obere ego, ị ga-etinye ọnụ nke kachasị nta. Ụzọ a maka njikwa ihe ize ndụ ga-egbochi nkwụnye ego site na nkwụsị, ọbụna mgbe a natara ọtụtụ nhọrọ ịfu efu. Ahịa ma nweta!
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ iji zie 25.09.2017 n'ụzọ ziri ezi site na 29.09.2017
Ebumnuche maka nhọrọ ọnụọgụ abụọ maka 5 nkeji ọhụrụ 2018
Atụmatụ maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ na 5 ...
05.05.2017 · 5
Usoro maka ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ bụ afọ 2017 ọhụrụ
Strategy maka ọnụọgụ abụọ nhọrọ ...
Ụzọ e si azụ EMA + RSI si n'aka onye ahịa nke ọnụ ụzọ ámá Bopt.org
Trading esi EMA + RSI si ...
Ulo oru ugbo ala na ugbo esi eme ahia na ihe o bu
Ulo oru ugbo ala ugbo esi eme ahia na ihe obu ...
Facebook Inc. Gbasawanye - na London ga-emeghe isi ụlọ ọrụ ọzọ
Otu esi eme ka ego na nhọrọ ọnụọgụ abụọ maka ọhụrụ